Dokotera amin'ny voa
Matetika ny marary no miatrika olana toy izany, rehefa tsy azon'izy ireo hoe iza no dokotera manontany momba ny voa voa mafy. Voalohany aloha, tsy maintsy lazaina fa matetika ny faharesen'ny rafi-pandaminana dia mitaky fomba fijery feno amin'ny fitsaboana ilay aretina. Izany no mahatonga ireo manampahaizana maro hiatrika ny fitsaboana ny ankamaroan'ny aretina toy izany. Matetika anefa ny marary no antsoina hoe nephrologista sy urologista. Alefaso amin'ny antsipiriany bebe kokoa momba ireo manam-pahaizana manokana ireo izahay, ary hiantso ireo aretina tokony hotsaraina amin'izy ireo.
Iza no dokotera mitondra ny voa amin'ny vehivavy?
Matetika izy io dia nephrologista. Izy io dia manampahaizana momba ny fitsaboana, ary koa amin'ny fitsaboana, ary miaraka amin'ny fisorohana ny aretin'ny voa. Ny andraikitry ny nephrologist dia ahitana ny toeram-pitsaboana (eo ambanin'ny toeram-pitsaboana) fandinihana ny marary, ny fanendrena ny sakafo ho an'ny marary izay manana aretina mihasimba (urolithiasis).
Azonao ampiharina amin'ny manam-pahaizana manokana io raha manana:
fanaintainana eo amin'ny faritra lonaka;
ny tsy firaharahiana urine;
miova amin'ny fofona sy mangarahara amin'ny urine;
ny endriky ny odya eo amin'ny tongotra, ny tanana, ny tarehy.
Raha miresaka momba ny aretina ateraky ny nephrologista dia:
Ny voan'ny tsimok'aretina (pyelonephritis, glomerulonephritis);
Ny fiovana amin'ny kalitao sy ny fananganana ny piora voavonjy (pyuria, proteinuria, hematuria ).
Iza no dokotera mitsabo ny voa amin'ny lehilahy?
Ny vahaolana amin'ity olana ity amin'ny solontenan'ny firaisana ara-nofo dia ny urologista. Amin'ity tranga ity, io manam-pahaizana manokana io dia tsy ny fitsaboana fotsiny amin'ny lehilahy, fa ny fanaovana firaisana ihany koa. Raha marina izany, dia azontsika atao ny milaza fa dokotera toy izany no jerena amin'ny:
fanaintainana eo amin'ny faritra lonaka, voa, ambany kibo, kilaometatra;
fanasitranana mahatsiravina, fahasarotana eo amin'ny fizotran'ny fanodinana urine;
ny fijery ny diloilo;
izay ahiahiana ho tratran'ny aretina azo avy amin'ny firaisana.
Ny dokotera izay mitantana ny voa amin'ny lehilahy, matetika dia manampy sy amin'ny fanitsakitsahana toy ny dysfunile erectile, ny tsy fahampian'ny lahy, ny prostatitis.
Noho izany, te-hanamarika aho fa mba hahatakatra hoe iza no misy dokotera miasa ao amin'ny voa dia ampy ny fitsidihan'ny mpitsabo ny distrika. Ity mpanao fandavan-tena ity dia hanao fanadihadiana voalohany, ary raha voan'ny voa izy io dia alefa any amin'ny dokotera izay manitsakitsaka ny fandikana ny asan'ity vatana ity.
Galactocele amin'ny tratra
Calendula amin'ny gynécologie
Marika famantarana ny mastis ao amin'ny menopause
Bartholinitis - fitsaboana ao an-trano
Ahoana no anehoan'ny syphilis?
Mavesa-danja mandritra ny fadimbolana
Chlamydia amin'ny vehivavy
Adenozon'ny loham-pianakaviana - inona moa izany?
Serous cystadenoma ny ovaire
Cytologie fluid de cervix
Ny cystika dia fitsaboana
Akanjo akanjo mandritra ny andro
Fan Taylor Swift dia nandroba ny banky ary nanipy vola tamin'ny mpihira
15 amin'ireo mpamono voafantina malaza indrindra
Ravin-kardy misy tsaramaso sy tongolo lay
Rahoviana ny hanadio ny tongolo lay?
Soda sy Lemon amin'ny fidiram-bola - prescription
Salady voankazo misy siramamy
Niresaka tamin'ny antsipiriany momba ny fanomanana ny anjara asan'ny "Spider-Man" vaovao i Tom Holland.
Vehivavy kiraro fika
Blake Lively dia bevohoka fanindroany
Tavoaha mavo amin'ny ravina voatabia ao amin'ny trano fonenana
Fampiharana ny moanina Tibetana
Rice casserole ao amin'ny multifariate
Miaraka amin'ny lamasinina
Ny hormone prolactine - inona io?
Phenibut - analogues
Vehivavy Fiambenana Vehivavy
Kosika ho an'ny tarehy fa tsy crème
Ampiharo amin'ny "fiarovana ny afo"